Uninazala nomyeni-bayithiyile ekuqaleni. Uhlangothi lwabani lokuthatha?
Phakathi kwesando kunye ne-anvil. Ngoko uvakalelwa kukuba umfazi, unyanzelekile ukucima iingxabano phakathi komama wakhe nomyeni wakhe. "I-Hammer" kunye "nesiganeko" kunokutshintsha indawo, ihlala iphakathi, phakathi kwemililo emibili.
Ngokuqinisekileyo, ukuxabana kwentsapho kwavela kaninzi xa umkhwekazi nomkhwekazi babonwa kuphela kathathu ngonyaka: ngomhla kaPetrov, ngomhla we-Ilin no-Assumption. Umkhwenyana wam wayenomkhwenyana wam, unyana wam othandekayo, umkhwenyana wam wayengumvakalisi wokuqala, kwaye kwakukho i-pie etafileni, ukuba umkhwenyana wayehlala egcekeni, kwaye iipencake zazinandi. Kodwa musa ukukhawuleza ukukhwelela ookhokho bethu. Ubulumko buntu obuyiminyaka eliwaka, obhalwe kwimithombo yendalo, buqinisekisa ubungqina bexesha la mandulo phakathi komamazala nomkhwekazana. Kwaye kukho kule mpi enye inxaxheba, mhlawumbi umntu ohluphekileyo-intombi, naye ungumfazi. Umfazi ongonwabi kufuneka aphose phakathi kwamaqela amabini aphikisayo, phakathi kwendoda nomama, engazi ukuba ngubani, nini nawaphi ukukhusela. Amabali endiya kuwaxelela, omnye umntu, mhlawumbi, uya kuzincama - "kungekhona kum kuphela", kodwa kumntu okhupha indlela yokuphuma kwimeko ebonakala ngathi yinkathazo - ukusuka kwicala libonakala ngakumbi.
Umkhwekazi womkhwenyana wanika i-ruble, kwaye emva kokunika kunye nesiqingatha ukuba athathwe kwiyadi
Ane ixesha elide elinobubele ngenkampani yonke yamabhinqa ethu. Akazange aphile olunye usuku noninazala, kodwa wazisa umyeni wakhe kwigumbi legumbi lamathathu. Xa kwintlanganiso kwakukho intetho ngesihloko esivuthayo sobudlelwane phakathi kwezihlobo, u-Anya wayehlala ethule. Kodwa ngelinye ilanga wabiza: ndiya kumnceda ekukhangela indlu yakhe kunye nomyeni wakhe.
Njengoko sonke sazi, unina kaAnina ngumntu omhle. Wenyusa intombi yakhe yedwa, wamnika ithuba lokufumana imfundo ephakamileyo, exhaswe ngemali, wazisa umfundi wakhe wangaphambili, wamkela ngokuvuya ukuba abantwana baya kutshata baze bahlale naye. I-Scandals yaqala ngenyanga yokuqala yokuhlala. Umfazi okhaliphekileyo waba ngumfazi onobuqhetseba kunye nobuqili. Umkhwenyana obizwa ngokuthi "yena", nangaphambi kwakhe. Ukuthulisa ukubonisa, ukuvulela umnyango, ukufunga indoda yomyeni wakhe kwaba yinto evamile. Akukho nto kodwa izikhalazo eziqhubekayo kumkhwenyana wakhe, ovela kunina unina u-Anya akazange ave: "Wahamba ngeenyawo zesitalato ngaphantsi komzila ukuya kwindlu yangasese; Waphuza ubisi olusele - kungekhona yedwa endlwini; Yena, njengomnini, ujika kwiTV, usebenzisa ifowuni. " Ingxoxo kaFrank nokuzola kunye nomama ayizange ikhokele kuyo nayiphi na into. Iingqungquthela kwiimpawu eziphakanyisiweyo kunye neziqulatho ziphelile ku-Ani ngokuphazamiseka kwemiba kunye nenkqubo yokonyango ekliniki. Kufuneka kuqatshelwe ukuba umkhwenyana wakhe wahlambalaza uninazala, ngoxa ehlalisa umfazi wakhe, enika ithuba lokukhetha indlela yokuphuma kwimeko.
UAnya wavuma kum ukuba waxolisa unina kwaye wayekholelwa ukuba emnyakeni wakhe wokuqala womtshato sele ecinga ukuqhawula umyeni wakhe othandekayo: akunakwenzeka ukushiya umama wakhe wedwa, akunakwenzeka ukutshintsha ulwalamano olukhoyo, akunakwenzeka ukuba kubekho ngaphezulu ... kwiminyaka emithathu yena nomyeni wakhe bashiya le ndlu kwaye amagama okugcina ka-Ani, awayebhekiswe kumama, athi: "Ndiya kuthiya!".
Utyhafile? Ewe. Mhlawumbi, kwakungekho mfuneko ukuzisa le meko ngokugqithiseleyo, kwaye bekufanelekile ukuba uqale ukujonga indlu ehlukeneyo ngaphambili, ngaphandle kokuchitha ixesha kwiingxoxo ezingenakuqhamo. Ngendlela, oku kukungaqondi kakuhle (kubaluleke kakhulu kwiintombi ezihlala ngaphambi komtshato kuphela nonina) ukuba akuyimfuneko ukushiya umfazi osekhulile. "Umama uya kuba nzima, akakwazi ukuba yedwa," iintombi ezinothando zithandana kwaye zihlala ziphosakele (ukuba, ngokwenene, unina akagulayo ngento enzulu). Ubulumko bemihla ngemihla luthi abantu abaselula kufuneka bahlale ngokuhlukileyo - kungcono kwaye bazincwane kubo nangenxa yesizukulwana esikhulileyo. Nangona kunjalo, uqeqesho lubonisa ukuba ukuhlala ngokwahlukileyo akuqinisekisiyo ngokupheleleyo ubudlelwane obuhle.
Akunjalo kwi-serum ukhilimu omuncu, okanye kumkhwenyana wesizwe
Sasisebenza kunye noTatyana Petrovna. Wayengumfazi wongunjingalwazi, ngokuhlala ekhuluma malunga nobukhosi kunye nobunzima bentsapho yakhe, enxibe kwaye enxibe kakuhle, wayeziqhenyce ngobuhle kunye nokukhuliswa kwentombi yakhe. Watshata nendoda eselula, ingqondo yakhe, ubuhle kunye nemikhwa emihle yayingathandabuzeki. Abaselula bahlala ngokwahlukileyo.
Emva kwexesha elithile, saqaphela ukuba umxholo oyintloko kwiingxoxo zikaTatyana Petrovna yimbambano yokungabi mthethweni kwemitshato engalinganiyo. Wayekhathazekile kakhulu: intombi yakhe ehlakaniphile nentle, eyayivela kwintsimi ecebileyo nengqiqo, yaza yaza yatshata nomntu onomzali onomsebenzi onzima. Yaye yintoni na? Ummandla wabasebenzi abangaphandle, "Khrushchevka", indlela yokuphila engenangqondo, akukho nxibelelwano olupheleleyo. Umtshato ongalinganiyo uyingxaki! Wenza konke akwaziyo ukufumana intombi yakhe kunye nomzukulu wakhe ekhaya. Kuphela umtshato!
Ukuba iphupha likaTatyana Petrovna lenzekile, safunda kuphela emva komtshato omtsha wentombi. Kwakungekho lula, ngokutsho komama, ukuba abuyisele umfazi omncinci nomntwana kwindlu yabazali aze amphoqe ukuba ashiye isigqibo sakhe esitsha. UTatyana Petrovna wathola umkhwenyana ofanelekileyo kunye nendoda yakhe intombi intombazana. Umbhali odumileyo, umninimzi wezindlu, iimoto, iindawo ezixhambileyo, i-fortake yaba yinhlanhla ... Abancedisi bee-laboratory kwisebe babengenamavila ukuba bajonge kwi-"Literary Encyclopaedic Dictionary" kwaye bafumanisa ukuba "osemncinci" undala kunomkhwekazi iminyaka engama-7, ngaphandle kwelali.
Andiyazi ukuba uvuyo ubomi bentombi ethobelayo, kodwa ndicinga ukuba oku akunjalo xa kwakufuneka abonise ukuyeka kwakhe. Ngokuqinisekileyo, ukuhlala phakathi kwesando kunye nesisombululo kusongela ukuba ibe yintsimbi engenanto. Kodwa kufuneka ikhutshwe, ibonise umlingiswa wayo. Oku kwenzeka ngokubhekisele kwiimeko apho umama-mkhwe wenza njengecala elikhubekileyo. Khawucinge, kwenzeka kwaye unjalo.
Akukho mpawu endlwini - thabatha umkhwekazi
UGalina Ivanovna wasebenza iminyaka emininzi kwindawo yokwakha, wayehlala ekhangela ithuba lokufumana ingeniso eyongezelelweyo, ukuze intombi yakhe ingayi kubakho nantoni na. U-Olga waphumelela e-yunivesithi, wahamba kakhulu, egqoke kakuhle, waqokelela ithala leencwadi elungileyo, edibene nabantu abafundelekileyo nabafundiweyo. Umama wayeziqhayisa ngentombi yakhe, emnika inkululeko epheleleyo ekuziphatheni nasekukhethweni komlingane ebomini. Bahamba kakuhle, baphathana ngokuthandana nomsa.
UOlga washada nomfana osempilweni entle. Ngokukhawuleza emva komtshato benza imali yokuhlala kwindlu esanda kwakhiwa, kodwa ixesha lokuba behlala noGalina Ivanovna. Indoda yentombi enethuba lokuxhasa intsapho, ngesizathu esithile, iyakubheka ukuba iyakwazi ukubeka umyalelo wayo kuyo. Ukubiza uGalina Ivanovna phambi kobakho "umkhwekazi", uvela kwiindawo eziphakamileyo zomcebisi kunye nenkosi "wamvumela" ukuba ahlambe kunye neengciki zensimbi, izicathulo ezihlambulukileyo, asebenze isidlo sakusihlwa aze ahlambe imoto yakhe. Umfazi olihlwempu, ongeloko ebamba ikhwelo elidakisayo lomkhwenyana wakhe othandekayo, wazama ukungazikhubekisi, kwaye kubaluleke kakhulu ukunceda intombi yakhe endlwini kwaye ingabi yimeko engqubuzanayo kwintsapho. Xa abahlobo bakhe beza, waphendule kumagama kamamazala wakhe nge-grin sarcastic: "Ewe, unokukhonza" ikhofi eshushu, "kodwa kungekhona kwiikomityi zetiyi, njengobusuku; Ewe, wonke umntu ufuna ukuzama isaladi yakhe, kodwa "ungayilali" it ... U-Olya kwiimeko ezinjalo wayelahlekile, wahlutha kwaye wazama ukususa uxhaphalo ngehlaya. Ekhitshini, wayithuthuzela ngenyameko unina, kwaye ebusuku wacebisa ukuba umyeni wakhe ahlele amamkelo xa umama wayeseDacha okanye xa befudukela kwindlu yabo. Ekuphenduleni, ndakuva ukuba umamazala wayenokuhlala ngokusisigxina kwi-dacha yakhe.
Ngaphambi kokuba umtshato, u-Olya wandixelela ukuba wayeya kuthiwa yintombi yakhe egameni lonina. Xa ndiza nezipho kubo endlwini, ekuhambeni ndazilungisa isicatshulwa - uKatyushka wazalwa. Kutheni batshintshe iingqondo zabo? U-Olya waba neentloni, wahlala ethule, kwaye uGalya Ivanovna, echulumancisa ngokuvuya, wachaza: waqhubeka egxininisa ngeli gama, ekubeni uninazala akanalo ntombi kwaye uya kuvuya ukuva ukuba umalokazana wayethi le ntombazana emva kwakhe. Emva koko u-Olya wavuma kum ukuba umyeni wakhe, ngaphandle kokubonisana naye, wagqiba ngoko, ukukhawuleza ukuba afumane isatifikethi sokuzalwa kwentombazana ngaphambi kokubuya komfazi esibhedlele. Olya ngezinyembezi nokuxolisa ngenxa yesenzo somyeni wakhe watshela wonke unina. Umfazi omdala osisilumko wenza sengathi akazange akhubekiswe nonke, kwaye wathembisa ukuthanda amantombazana akhe ngakumbi. Andikwazi ukunceda kodwa uqaphele ukuba umamazala, owayenelisekile ngesenzo somalokazana wakhe, wayengumhla wokuqala kunye nomama wakhe emva kweenyanga ezintathu kuphela.
Kakade, intombi ibhinqa kufuneka icinge ngokuqinisa yakhe intsapho. Kodwa yiyiphi indleko? Ukumiswa - kulo mzekelo ngokumalunga nomyeni wakhe - akunakulungele. Akakwazi ukuvuselela intlonipho kumyeni wakhe.
Ngoko ukuba ube ngumfazi oselula, njani ukwenza "kunye neengcuka zizele kwaye izimvu zikhuselekile"? Oku kuya kufuna imizamo ethile, izakhono zezopolitiko kunye nobuqili. Kananjalo ukunyamezela nokuzola - emva kokuba wonke umntu kufuneka agcine intloko ebandayo ebundwini. Iimpawu ezinjalo azibonakali ngokukhawuleza, kodwa kubomi bonke.
Okokuqala, simele siyeke ukutshintsha ukugxeka ubomi, unina, umyeni, kunye nokuzithemba kwaye uvume ngesibindi ukuba ngeendlela ezininzi ufanele uzigwebe.
Ukuze unqabise umama kwaye ngoko umthintele ukuba angaphuli, bonisa ngezenzo uze ubonise ngamazwi inhlonipho yakhe, uthando lwakhe ngaye. Yiba nesithakazelo kwintlalo yakhe, khuluma rhoqo kunye naye kwaye ungalibali, njengangaphambili, uhleka uze uncumoze naye.
Zama ukumbheka ngamehlo kuyo yonke into eyenzekayo endlwini yakho (indlu yakhe), kwaye emva koko izinto eziqhelekileyo ekuziphatheni kwayo ziya kuguquka kwizenzo ezinengqiqo zowesifazane ophakathi, mhlawumbi unina wentombi enye.
Musa ukummngeni ngamanxeba kunye nosongelo, musa ukulimaza iimvakalelo zakhe zomama. Qaphela iimpazamo zakho kunye neempazamo zomyeni wakho, uthetha ngezwi elichanekileyo nelomnene ukuba, ngombono wakho, akalungile.
Khawuqikelele igalelo lakhe kwimisebenzi yasemakhaya kunye nohlahlo lwabiwo-mali. Zama ebusweni bangaphandle ukuba ugxininise ukubaluleka kwendima yawo ekudaleni umoya wokuthanda nokuqonda kwintsapho yakho.
Ukuba uqwalasela konke oku kwaye uthabathe inkonzo, akufuneki ukuba unqunyelwe umama imithetho yokuziphatha ngokufanelekileyo kunye nomkhwenyana wakho, kwaye awuyi kudingeka ukuba uzalisekise ngokungenasisiseko kwemigaqo yakho ebuhlotsheni bakhe naye.
Uqaphele ukuba akufanele "ulungise" umama wakho, kwaye akufuneki ukuba ufundise kwakhona umyeni wakho. Kumele wenze kwaye uzitshintshe. Ngaphandle koko, iingxaki ezinokubonakala zingenakuzithengiswa kwaye ezingenakunqandeka ziya kunqoba. Akukho nto ihluleke ngakumbi kunokuba iyanqotshwa - kungekhona iintshaba, kungekhona izifo, kodwa i-gray day daily routine. Kubalulekile ekusebenzeni, ngokufanelekileyo ukujamelana nobunzima beentsapho kwaye ungagxininisi nje inkunkuma, kodwa ubuthathaka bakho kubantu.
Umfazi oqinileyo uyonwabile ngovuyo kunye nencwina yenkxwaleko, kuba uyayiqonda ukuba ixeshana. Ngelishwa, kwavela ukuba akulula ukuhlala phantsi kophahla olulodwa kunye nabazali bakho. Ngaba kuyafaneleka ngenxa yesi sizathu sokuba ube nosizi, ucaphukile, uhamba ngobuso obubi kwaye umemeza kumama wakho nomyeni wakho? Akunjalo.
Hlala, njengaphambili, ujabule kunye nangoko, ube nobulumko, ufumane isimo sengqondo sefilosofi ebomini: ukuzola, ubumnene kubantu kunye nokuhle, nokungqubuzana, kunye nexesha elibuhlungu lokuba. Kwaye apho kukho ukuzithiba, apho umntu anqobile ukukhawuleza, umntu ngokukhawuleza uzive ezolile kwaye unesihluthulelo. Yiva kunye nabathandekayo bakho. Emva koko, ngokubanzi, nguwe owabaphoqa ukuba bahlale kwelinye igumbi kwaye bahlupheke.
Umbhali: Tatiana Porecki
Yintoni amadoda abona njengowesifazane ococekileyo?
Ukusila kweenyawo ukuphumula nokuphuculwa kwempilo
Sebenza ngemikhwa emibi
Desynchronosis, uluhlu lwamazwe ngamazwe
Ngenxa yintoni isicidosis?
Ukugxila kwengqalelo kubalulekile emsebenzini